သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (45)ရပ်ကွက်တွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10110806 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10080256 အတွက် လွှမ်းထက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9958238 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9916442 အတွက် လွှမ်းထက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
31ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်လမ်းမဒဲ့ဆင်း ပထမထပ် ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9902478 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြောက်ဒဂုံ (33 ရပ်ကွက်) ရှိ တိုက်ခန်းများအရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9804251 အတွက် Gay Har Min Real Estate & Law Firm Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(AYA Bank နဲ့ အရစ်ကျရ) ပေအကျယ် (18x54) တိုက်ခန်း (၄)လွှာ ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9765121 အတွက် iMyanmarHouse.com သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေအကျယ် (18x54) တိုက်ခန်း၊ (2)ခန်းတွဲ (၅)ထပ်တိုက် (AYA Bank နဲ့ အရစ်ကျရ)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9765022 အတွက် Great7Rays Engineering Co., Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Great7Rays Engineering Co., Ltd ပိတ်ရန်
🏢For Sale 🏢မြသီတာဥယျာဥ်အိမ်ယာဘေး ✔သီဟသူလမ်း အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက Ph. ..09427291306 09799583690 ကို ဆက်သွယ်ပြီးလာကြည့်လို့ရပါပြီ........
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9718713 အတွက် Aung Htet Aung Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြောက်ဒဂုံ ၄၁ ရပ်ကွက် ဦးဝိစာရ ဒဲ့ပေါက် တိုက်ခန်းလေးရောင်းချင်လို့ပါ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9699369 အတွက် Aung Htet Aung Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်